नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हरेकले थाहा पाउनुपर्ने कुरा : किड्नी किन फेल हुन्छ ?
हरेकले थाहा पाउनुपर्ने कुरा : किड्नी किन फेल हुन्छ ?
तसर्थ किड्नी भनेको के हो ? मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ ? किड्नी कसरि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ ? किड्नी बचाउनको लागि के गर्नुपर्दछ ? यी यवत कुराहरु सबैले जान्न जरुरी छ । ग्राण्डी अस्पतालको विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज ज्ञवालीसँगको कुराकानीबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा आज हामी किड्नी सम्वन्धि १० महत्वपूर्ण जानकारीहरु प्रस्तुत गर्दैछौ । आफुले पढिसकेपछि सबैको जानकारीका
लागि सक्दो सेयर गरिदिनुहोला ।
यसबाट यो पनि चल्दछ कि किड्नी कति खराब भएको छ भनेर । आजकाल किड्नी पेलको मुख्य कारण ब्लड प्रेसर, सुगर, पत्थरी तथा धेरै पेन किलर प्रयोग गर्नाले हुने गरेको छ । तसर्थ यसबाट बच्न जरुरी छ ताकि गम्भीर स्थिति आउनबाट बच्न सकियोस् । - स्वास्थ्य/ जिबनशैली